Apple waxay heshay Abaalmarinta Warshadaha ee iPhone X iyo iPad Pro Soo Bandhiga | Wararka IPhone
Apple waxay heshay Abaalmarinta Warshadaha ee iPhone X iyo iPad Pro Bandhigyada
Shaashadu waa qaybta ugu muhiimsan ee qalabka moobiilka, kaliya maahan sida uu u eg yahay, laakiin sidoo kale sababta oo ah sida ay ula qabsaneyso xaalad kasta iyo sida aan ula macaamili karno. Dsanado badan Apple ayaa had iyo jeer qabsanayay jagooyinka ugu horeeya (ama si toos ah booska koowaad) marka la eego tayada shaashadda ee iPhone iyo iPad, inkasta oo sannadihii ugu dambeeyay horumarku sheegayo in tiknoolajiyadda AMOLED ee Samsung ay ka dhigtay waxyaabo aan u caddeyn Apple.
Sannadkan imaatinka shaashadda OLED ee iPhone X iyo shaashadda cusub ee LCD ee iPad Pro, si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in mar kale abaalmarinnadu ay ku soo laabteen dhinaca Cupertino, tan iyo shirkadda ayaa hadda heshay Abaalmarinta Warshadaha ee Muujinta bandhigyadeeda moodooyinka ugu dambeeyay ee iPhone iyo iPad Pro.
IPhone X wuxuu soo saaray shaashadda OLED. Ka dib sanado badan oo xan ah iyo Apple oo ka soo horjeedda hirgelinta tiknoolajiyadaas shaashadeeda, iPhone ayaa ugu dambeyntii adeegsanayay, ugu dambeyntiina waan ku raaxeysan karnaa Madowga dhabta ah, 1.000.000: 1 isbarbar dhiga, iyo taageerada HDR, labadaba Dolby Vision iyo HDR10, wax dad badani ku faani karaan aaladda mobilada. Tiknoolajiyaddan oo ay weheliso True Tone oo la jaanqaadaya midabka shaashadda iftiinka deegaanka ayaa ka dhigay shaashadda iPhone X mid u qalma abaalmarinta warshadan.
IPadku malaha shaashad OLED ah, laakiin shaashadeeda LCD ayaa ugu fiican qaybteeda. Oo hadda tikniyoolajiyadda Apple ee ProMotion way ka sii fiicantahay. Shaashadda 10,5-inji cusub ee iPad Pro waxay leedahay heer cusbooneysiin ah 120Hz, taas oo animations-ka ka dhigaysa dheecaan badan, laakiin Apple waxay ka dhigeysaa inay la qabsato waxyaabaha ay muujineyso, si ay ugu kala duwanaan karto 24Hz ilaa 120Hz si ay had iyo jeer u bixiso sawirka ugu fiican ee suuragalka ah Waa qalabkii ugu horreeyay ee lagu daro shaashadda noocan ah, waana sababtaas tan ay ugu guuleysatay abaalmarintan.
Xanta ku saabsan qalabka sanadka soo socda Waxay ka hadlaan shaashadda OLED iyo LCD ee tikniyoolajiyadda cusub, oo sidoo kale waxaa jira hadal ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee shaashadda OLED ee iPad-ka, arrin wali u muuqata mid murugsan. Waan arki doonaa wixii war ah ee Apple nooga keento arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay heshay Abaalmarinta Warshadaha ee iPhone X iyo iPad Pro Bandhigyada
Fiidiyowga iPhone 6s ayaa qarxaya kaas oo keenaya shaki badan
Tirada guud ee gawaarida iswada ee ku jira magaca Apple waxay gaarayaan 55 cutub